Xildhibaannada labada gole ee kasoo jeeda Beelaha Hawiye oo saluugtay saamiga laga siiyay Baarlamaanka Koonfur-Galbeed – Kalfadhi
Xildhibaannada labada gole ee kasoo jeeda Beelaha Hawiye oo saluugtay saamiga laga siiyay Baarlamaanka Koonfur-Galbeed
Wasiirada iyo Xildhibaannada labada gole ee kasoo jeeda Beelaha Hawiye, ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Mogadishu.
Shirka waxaa looga hadlyay arrinta Koofur Galbeed, gaar ahaan liiskii Xildhibaannada Baarlamaanka Koofur Galbeed oo beeshu saluugtay saamiga laga siiyay.
Xubno kamid ah kuwii ka qeyb-gallay shirka ayaa soo jeediyay in tabashada beelaha Hawiye ee kuraasta Xildhibaannada laga siiyay Koofur Galbeed si midnimo leh loogu doodo.
Guddiga ayaa waxaa Guddoomiye looga dhigay Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda safar ku tagaan magaalada Baydhabo si ay ula kulmaan Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Wasiirka Dastuurka iyo Ergayga QM oo ka wada hadlay horumarka laga gaaray geedi-socodka dib-u-eegista dastuurka
Xildhibaan Zakariye “Waa waajib in dowladda ay la fariisato dhinacyada wax diidan”